Shirka Madaxda Maamul Goboleedyada oo ka furmay Dhuusamareeb – news
Shirka Madaxda Maamul Goboleedyada oo ka furmay Dhuusamareeb
Shirkan ayaa markii hore la filayay inuu furmo Khamiistiis lasoo dhaafay, July 9 balse dib u dhacay kadib markii Madaxda ay tagi waayeen magaaladda Dhuusamareeb waqtigii looga baahnaa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa goordhaw ka furmay magaaladda Dhuusamareeb shirkii Madaxda Maamul Goboleedyada, kaasoo ay isagu yimaadeen hogaanka shanta Maamul ee ka jirta Soomaaliya, Puntland, Galmudug, HirShabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubaland.
Waa maalintii kowaad ee Shirka, waxaana ajanduhu yahay hadal-jeedinta Madaxweyniyaasha Maamullada, oo khudbadahooda hadda toos u socdaan, iyadoo maalinta berri ah la filayo in kulanka laga soo saaro War-murtiyeed wadajir ah, oo hogaamiyeyaasha shiraya ku shaacin doonaan qodobada ay ku heshiiyeen.
Shirka Wada-tashiga Dhuusamareeb ayaa kusoo beegmaya xili Maamullada iyo Dowladda Federaalka uu u dhaxeeyo Khilaaf siyaasadeed ku salaysan arrimaha doorashadda iyo qeybsiga Khayraadka dalka, sida Shidaalka oo sharcigiisa dhawaan uu saxiixay Farmaajo, iyadoo aan Maamullada laga talo-gelin diyaarintiisa.
Maamulka Farmaajo ayaa ku guuldareystay inuu wada-shaqeyn la yeesho Maamul Goboleedyada, waxayna midaasi sababtay kala qeybsanaan siyaasadeed iyo inay dib u dhacdo doorashooyinkii la qorsheeyay inay November 2020 ka dhacaan wadanka.